ဝိတ်မစက်များအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီိးများပါအသုံးပြုနိုင်သည့် ဝိတ်မစက်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ အားကစားပစ္စည်းများစွာ ရှိသော Winner Sport အားကစားပစ္စည်း Showroom တွင် လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားကစားခန်းမများ ဖွင့်လင့်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်နဲ့ တစ်နေရာတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Double sided. Four cards printed on both sides in the following contrast levels: black, 25%, 10%, 5%, 2.5%, and 1.25 Cards are 9&quot; x 9&quot; (23 cm x 23 cm). Includes instructions.
အားကစားလိုက်စားသော လူကြီးမင်းများအတွက် STEPPERS (ခြေနင်းစက်များ) များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ တစ်မျိုးသုံးစက်များနှင့် သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်သော စက်များလည်းရှိသည်။ ခြေနင်းစက်၊ လက်မောင်းလွှဲဝိတ်တုံး၊ ခါးလှည့်လေ့ကျင့်ခန်းကစားနည်းစက် မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားကစားပစ္စည်းများစွာ ရှိသော Winner Sport အားကစားပစ္စည်း Showroom တွင် လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားကစားခန်းမများ ဖွင့်လင့်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်နဲ့ တစ်နေရာတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
LEA Symbols Massachusetts Near Vision Screener
LEA Symbols Massachusetts Visual Acuity Test Format Near Vision Screener with 16-inch (40cm) cord ensures proper testing distance. Printed two sides. Response key printed on test card. Includes flash cards and instructions. 8&quot; x 10&quot; (20.3 cm x 25.4 cm).
အပ်ထိုးတာ ဖြစ်စေ၊ စာကြည့်တာ ဖြစ်စေ ဓာတ်ပုံထဲ သေးသေးလေးကို ရှာတာဖြစ်စေ နာရီနဲ. လျှပ်စစ် ပစ္စည်း ပြင်ဖို. ဖြစ်စေ စိန်နဲ. လက်ဝတ်ရတနာ များ သေချာ ကြည့်ဖို. ဖြစ်စေ အနီးမှုန်သူများ အတွက် ၁၆၀ % မြင်ကွင်း ချဲ.ပေးနိုင်တဲ့ အနီးကြည့် မျက်မှန် လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/879083845563268/ ဈေးနှုန်း - ၂သောင်း Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
THE SERIES OF TRAINER BIKE (လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီးများ) ကို တစ်နေရာထည်းတွင် အမျိုးအစားစုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး 3.6A-4, Bike, Elliptical Bike, Deluxe Elliptical Bike လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး, Magnetic Elliptical Bike လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး, Recumbent, လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး, B902 brand လူကြီးမင်းစိတ်ကြိုက်ဝယ်နိုင်ပါသည်။ အိမ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သော သူများအတွက်လည်း နေရာမယူသည့်အပြင် မိသားစု အကုန်လုံး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားကစားပစ္စည်းများစွာ ရှိသော Winner Sport အားကစားပစ္စည်း Showroom တွင် လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားကစားခန်းမများ ဖွင့်လင့်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်နဲ့ တစ်နေရာတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
LEA Numbers Low Contrast Test
LEA Numbers Low Contrast Flip Chart. Chart presents numbers at the following contrast levels: black, 25%, 10%, 5%, 2.5%, and 1.25%. Pages are offset for easy flipping. Each chart includes recording forms and instructions.6pages, 3.25&quot; x 9&quot; (8.25 cm x 22.9 cm).
Bang Good Head Massager
ခေါင်းနှိပ်မယ်။ ကွန်ပျူတာ ကြည့်လို. တစ်နေကုန် ငြောင်းငြာနေသော ဦးခေါင်းအတွက် ခေါင်းနှိပ်စက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဓာတ်ခဲ သို. usb နဲ. နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှိပ်ပုံစံ ၈မျိုး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ ငြင်သာတဲ့ တုန်ခါမှုနဲ. ပင်ပန်းမှုများစွာ သက်သာစေသော Brain Massager လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - 40000 kyats Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားအနှိပ် ပစ္စည်းများ ကြည့်ရန် http://www.rocketonlineshopping.com/category/massage ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်ချင်သူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ပန်းကန်ဆေးမှာလား၊ ကော်ဖီ ပုလင်းကို ဆေးမှာလား ကားဆေးမှာလား၊ လှေဆေးမှာလား စားပွဲသုတ်​မှာလား ဘယ်နေရာဆေးဆေး၊ သုတ်​သုတ်​ ထောင့်စွန်းတွေအထိ သန်.ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ လက်အိတ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေး ပူပူနဲ. ဆေးတာတောင် စစ်တို. လက်သည်းလေးတွေကို အလှပျက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/879102042228115/ Sponsored Post လက်သည်း ငြိစက် http://www.rocketonlineshopping.com/2016/07/nail/ အိမ်ရှင်မတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပန်းကန်ဆေး လက်အိတ်လေးကို Rocket တွင် မှာယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - 14000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
အားကစားပစ္စည်းရှာနေသောလူကြီးမင်းများအတွက် တစ်နေရာထည်းတွင် အားကစားပစ္စည်းမျိုးစုံကို ရောင်းချပေးနေသော Winner Sport Show Room ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ THE SERIES OF TREADMILL (မော်တာလမ်းလျှောက်စက်များ) ရှာဖွေနေသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် (1).Horizon paragon4treadmill, (2).Johnson 8.0t, (3).Vision fitness TF 20 class, (4).4in 1 Mortorized Treadmill - လေးမျိုးသုံး မော်တာ လမ်းလျှောက်စက်, (5)Horizon plus 1, (6)T221, (7).Model 146B, (8). Model 148A, (9).Model 642E-1, (10). Model 242B, (11).Model 240c-1 brand, (12). Model T86 brand ပစ္စည်းများဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
LEA numbers Near Vision Card
LEA Numbers Near Vision CArd with 40 cm Cord Card measures 20.3 cm x 25.4 cm
ခြေနင်းစက်လေး အလုပ်များသူများအတွက် ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်မယ့် ခြေနင်းစက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ Brand: Suncao / double super Color classification: send twist plate + tools + lubricants Item No .: SC-S032D Fitness equipment Category: vertical stepper (handrails) Stepper Accessories Type: Lubricants Others According to fitness effect selection: o ဝိတ်ကျစေရန် အိမ်မှာ အေးဆေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အသံတိတ်ဆိတ်ပြီး ဆူညံမှု မရှိတဲ့ ခြေလက်ကျင့်ခန်း စက်လေးပါ။ ဈေးနှုန်း - ၁သိန်း ၂သောင်းကျပ် Delivery free in Yangon တခြား မြို.များကိုတော့ ရန်ကုန် ကားဂိတ်အထိသာ ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်ချင်သူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
High precision mercury apparatus in dye cast aluminum case. Glass tube of excellent precision. Easy to read anodized graduation plate up to 300mmHg. All metal parts chrome-plated with mercur locking device.Complete adult cotton cuff with D-ring.Mercury Sphygmomanometer, desk type mercury sphygmomanometer, table sphygmoamanometer. အရည်အသွေးပြည့်ဝကာ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပြီး ကျန်းမာသောဘဝများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် U Than Ohn &amp; Sons Co.,Ltd တွင် အရည်အသွေးပြည့်၊စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးပေးနိုင်သော Medical Products များအား ရောင်းချပေးပါသည်။
3 meters 45.7 cm x 50.8 cm Folds to 45.7 cm x 25.4 cm